Ikhaya le-Narrowtex | INingizimu Afrika | I-Narrowtex
LASHING & UKUBHADLA
Ngezinsizakusebenza eziku-inthanethi kanye nokuvuselelwa nge-COVID-19 eNingizimu Afrika, sicela uvakashele ku-SAcoronavirus.co.za
Isungulwe ngo-1969, iNarrowtex igubha iminyaka engama-50 yokukhiqiza okuhle. INarrowtex ingumkhiqizi futhi uyithumela kwamanye amazwe imicu ye-polyester eyelukiweyo, ukuqhuma kwe-polyester nokwelukiweyo, ukubopha okuhlanganisiwe, ukubopha okuhlanganisiwe, ukugoba ngamabhande, ukugoqa kwezimboni namateyipu amakhethini.
Kusuka kokuhlangenwe nakho nobungcweti kwezobuchwepheshe, kanye namazinga ekhwalithi ye-premium, iNarrowtex ithuthuke yaba yindawo eyaziwa kahle ezimakethe zasekhaya nezakwamanye amazwe ngama-55% emithamo yemikhiqizo esatshalaliswa eYurophu, e-USA nase-Australia.
Ngokuhambisana nokuzibophezela kwethu ekuqhubekeni sithuthukisa ukusebenza futhi sihlale siphambili emakethe yezindwangu ewumngcingo, iNarrowtex iphethe lezi zimvume ezilandelayo:
Ilabhorethri esesikhathini yeNarrowtex isetshenziselwa ukuhlolwa okuqhubekayo ngezigaba ezihlukene zokukhiqiza, ukuqinisekisa ukulethwa kwethu okungaguquki kwemikhiqizo ephezulu.
INarrowtex ibuye isebenzise amalebhu agunyaziwe ukulinganisa ie umshini oqinile futhi izitifiketi zokulinganisa zikhishwe yiLab egunyaziwe. Uma kudingwa amakhasimende, iNarrowtex inganikeza okulandelayo:
Eqine Test Umbiko
I-COA - Isitifiketi sokuhlaziywa
I-COC - Isitifiketi Sokuvumelana
Lezi zitifiketi zibala imininingwane yamakhasimende kanye nemiphumela yokuhlolwa yangempela.
Isakhiwo sokukhiqiza iNarrowtex kanye nehhovisi elikhulu kuseNingizimu Afrika edolobheni elisentabeni elisenkabeni ye-Estcourt, lapho izakhamizi zifeza khona izidingo zabasebenzi basefemini, zihlinzeka ngemisebenzi edingeka kakhulu endaweni. Lokhu kuyingxenye yohlelo lweNarrowtex lokuzibophezela kwezenhlalo olusiza nezikole zendawo ngezimali noma ezinye izidingo zemali ethile.
I-Narrowtex iyingxenye ye- Iqembu le-NTX okuyingxenye ye- I-SA BIAS Industries Pty Ltd.
Sisebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi sikunikeza okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kuwebhusayithi yethu. Uma uqhubeka nokusebenzisa leli sayithi sizocabanga ukuthi usinika imvume yakho.YamukelaInqubomgomo yobumfihlo